Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Job 27
Nepali New Revised Version, Job 27
1 तब अय्‍यूबले आफ्‍नो बहस फेरि सुरु गरे:
2 “परमेश्‍वर जीवित हुनुभए झैँ जसले मेरो इन्‍साफ गर्नलाई इन्‍कार गर्नुभयो, सर्वशक्तिमान्‌को नाउँमा, जसले मेरो मन तीतो बनाइदिनुभयो।
3 मेरो शरीरमा प्राण रहुञ्‍जेल, र परमेश्‍वरको सास मेरो नाकमा रहुञ्‍जेल,
4 कुनै पनि असत्‍य वचन मेरो मुखबाट निस्‍कनेछैन, अनि मेरो जिब्रोले कुनै झूट बोल्‍नेछैन।
5 तपाईंहरू ठीक हुनुहुन्‍छ भनी म कहिल्‍यै स्‍वीकार गर्ने छैनँ, म नमरुञ्‍जेल म आफ्‍नो ईमान्‍दारीलाई अस्‍वीकार गर्ने छैनँ।
6 म ठीकै छु भन्‍ने मेरो दाबीलाई म कायम राख्‍नेछु, म बाँचुञ्‍जेल मेरो विवेकले मलाई दोष लगाउनेछैन।
7 “मेरा शत्रुहरू दुष्‍टझैँ होऊन्‌, मेरा विरोधीहरू अन्‍यायीजस्‍तै।
8 किनकि ईश्‍वरहीन मानिस नाश हुँदा त्‍यसको के आशा हुन्‍छ र, जब परमेश्‍वरले त्‍यसको प्राण लिइहाल्‍नुहुन्‍छ?
9 जब दु:ख त्‍यसमाथि आइलाग्‍छ, के परमेश्‍वरले त्‍यसको पुकारा सुन्‍नुहुन्‍छ?
10 के त्‍यसले सर्वशक्तिमान्‌बाट आनन्‍द पाउँछ? र हर समय उहाँको नाउँको पुकारा गर्छ र?
11 “परमेश्‍वरको शक्तिको बारेमा म तपाईंहरूलाई सिकाउनेछु, सर्वशक्तिमान्‌को बाटोलाई म लुकाउनेछैनँ।
12 तपाईंहरू सबैले यी कुरा देख्‍नुभएको छ, तपाईंहरू यस्‍ता व्‍यर्थका कुरा किन गर्नुहुन्‍छ?
13 “दुष्‍टको निम्‍ति परमेश्‍वरले ठहराउनुभएको भाग यही हो, निष्‍ठुर मानिसको इनाम सर्वशक्तिमान्‌बाट यही हो।
14 त्‍यसका धेरै छोराछोरीहरू भए तापनि तिनीहरू तरवारले मारिनेछन्‌, र त्‍यसका सन्‍तानहरू भोकै रहनेछन्‌।
15 बाँचेकाहरू रूढ़ीले मरेर चिहानमा लगिनेछन्‌, अनि तिनीहरूका विधवा तिनीहरूका निम्‍ति रुनेछैन।
16 त्‍यसले कसिङ्गरसरह अनगन्‍ती धन-सम्‍पत्ति थुपारे तापनि, र थाक-थाक लुगाहरू जम्‍मा गरे तापनि,
17 ती त्‍यसले जम्‍मा त गर्ला, तर धर्मीहरूले ती लगाउनेछन्‌, र त्‍यसका धन-सम्‍पत्ति निर्दोष मानिसले बाँड्‌नेछन्‌।
18 त्‍यसले बनाएको घर पुतलीको गुँड़जस्‍तै कमजोर हुन्‍छ, अथवा पहरेदारको टौवाजस्‍तै हुन्‍छ।
19 त्‍यो धनी भएर सुत्‍ला तर अब उसो त्‍यस्‍तो हुनेछैन, त्‍यसले आँखा खोल्‍दा ती सबै गइहालेको हुन्‍छ।
20 विनाश भलझैँ त्‍यसमाथि आइलाग्‍नेछ, र आँधीबेहरीले त्‍यसलाई राती उड़ाएर लैजानेछ।
21 पूर्वको बतासले त्‍यसलाई उड़ाएर लैजानेछ, र त्‍यसको नाउँ निशानै रहनेछैन, बतासले त्‍यसलाई त्‍यसको घरबाट टाढ़ा उड़ाई लैजानेछ।
22 निर्दयतासाथ त्‍यो त्‍यसमाथि आइलाग्‍नेछ, जसै त्‍यो त्‍यसको शक्तिबाट भाग्‍नेछ।
23 त्‍यसको पतनमा ताली बजाएको आवाज र त्‍यसको चारैतिर खिसीको सोर हुनेछन्‌।
Job 26 Choose Book & Chapter Job 28